बडो आनन्दको सुसमाचार - Nepali Christians Site
Posted by Resham Kumar sunuwar on December 25, 2013 at 10:08am
निश्चय पनि आज ख्रीष्टमसको दिन खुशी र आनन्दसँग रमाएका छौं । किन हामी आनन्द हुन्छौं? किन हामी खुशी हुन्छौं? किनकि आज भन्दा ३०१३ वर्ष अगाडि ख्रीष्ट येशू मुक्तिदाताको जन्म भएको थियो । उहाँको जन्मले सारा विश्वमा आनन्द र खुशीको ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निश्चय पनि ती परिवारका सदस्यहरु अनि सबै नातेदार र छिमेकीहरु खुशी हुन्छन् । आनन्द मनाउँछन् । येशूको जन्म हुँदा त्यस्तै वडो आनन्दको सुसमाचार लिएर स्वर्गदूतहरु गोठालाहरुकहाँ प्रकट भएका थिए । किनकि ख्रीष्ट येशूको जन्मले सारा संसारको मानव जातिहरुमाझ स्वर्गीय आनन्दको सुसमाचार ल्याएकोले नै ख्रीष्टमसले महत्वपूर्ण सन्देश बोकेको छ ।
येशूको जन्म भएको वेला वेतलेहेममा गोठालाहरु आप्mनो वगालको रखवाली गरीरहेका थिए । तिनीहरु आप्नो वगालको हेरचाह गर्नलाई व्यस्त थिए । खासै अरु कुराको ध्यान र वास्ता त्यति थिएन । वास्तवमा गोठालाहरु भनेको तपाइँ म जस्तै समान्य मानिसहरु थिए । यी समान्य मानिसहरु आप्mनो दैनिकी जसोतसो गुजारीरहेका थिए । तर उनीहरुको एकाग्रतालाई भङ्ग गर्दै स्वर्गदूतहरु प्रकट भए । सबै गोठालाहरु भयभीत भईरहेका थिए । डराईरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा गोठालाहरुलाई स्वर्गदूतहरुले आनन्द र खुशीको सन्देश बाँडेको कुरा हामी पाउँदछौं । वास्तवमा ख्रीष्टको जन्मसँगै मानव जातिको लागि खुशीको कुरा जोडिएको छ । त्यही कुरा स्वर्गदूतहरुले पनि गोठालाहरुलाई सुनाएको हामी पाउँदछौं ।
यहाँ लूकाले वर्णन गरेका छन् कि कसरी समान्य गोठालाकाहाँ ख्रीष्ट येशू जन्मिएको सन्देश आयो । “तव स्वर्गदूतले तिनीहरुलाई भने, नडराओ,” वस्तवमा गोठालाहरु आप्mनो दैनिकी जीवनमा व्यस्त थिए । तिनीहरु आप्mनो वगालको हेरचाह गर्थे । तिनीहरुले रातीको समयमा सबै वगाललाई राखेर राखवाली गरीरहेका थिए । हामी कल्पना गर्न सक्छौं कि तिनीहरुले दिनभरीको कठिनाई काम पश्चात अव अराम गर्न लागीरहेका थिए । तर त्यो रात तिनीहरुको लागि सँधै भईरहने निरन्ताको रात जस्तो थिएन । किनभने तिनीहरुको त्यो रात अति नै भिन्न रात भिन्न अनुभव थियो । त्यो रात तिनहरुको विशेष रात थियो । किनभने स्वर्गदूत गोठालाहरुमाझ प्रकट भएका थिए । ज्योति तेजसाथ चम्किएको थियो । गोठालाहरु अति नै डराए । अनि स्वर्गदूतले भने नडराओ । निश्चय पनि स्वर्गदूतहरुले ती समान्य गोठालाहरुमाझ ख्रीष्ट येशू जन्मिएको खुशीको खबर सुनाएका थिए । ती गोठालाहरुको जीवन फेरी सँधैको जस्तो रही रहेन । उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन अवश्य पनि आयो ।
किनभने संसारमा मानिस जाति पापको कारण हराएका थिए । परमेश्वरबाट टाढा भएर निराशा र आशा नभएको अवस्थामा बाँचीरहेका थिए । यहुदीहरुले पनि येशू आउनु भन्दा अगाडि देखि नै विभिन्न अगमवक्ताहरुले मुक्तिदाता ख्रीष्टको जन्म हुने कुरा बताएकाले उहाँको बाटो हेरीरहेका थिए । त्यही समयमा स्वर्गदूतहरुले गोठालाहरु यहाँ बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाएका छन् । यो सुसमाचार सबै मानिसहरुको लागि थियो । यो सुसमाचार मुक्तिदाता ख्रीष्टको जन्मको विषयमा थियो । परमेश्वरले संसारको सबै पापी मानिसहरुलाई प्रेम गरेर आप्mनो पुत्र येशूलाई यस संसारमा पठाउनुएकोले सबै मानव जातिले ख्रीष्टको यो सन्देश सबैले सुनेर, बुझेर अनि जीवनमा लगाउन सकेमा सबैको हीत असल हुनेछ । फेरी पनि सबैलाई ख्रीष्टमस तथा २०१४ सालको शुभकामना ।
Comment by Resham Kumar sunuwar on December 27, 2013 at 2:03pm swagat chha hai ta teso bhae Comment by Shrawan Bomjan on December 26, 2013 at 9:51pm बेस्तताले गर्दा ख्रीष्टमस पछि मात्र यो लेख पढे । धेरै धेरै धन्याबाद दाजु आनन्दको सुसमाचारको निम्ति । RSS